28% yeVakuru veChikoro Vakwegura vanofunga Chikoro Chebasa ... | Martech Zone
28% yeVakuru veChikoro Vakuru vanofunga Chikoro Chebasa…
Chishanu, June 1, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Hat tip kune bizhack!
Kuramba Kufamba Kunoreva Kuramba Uri Pamba Here?
Iyo yepamusoro 10 Spamming ISPs Inogona Kukushamisa Iwe
Jun 2, 2007 pa12: 34AM
If GHS vaifanira kutora izvi kumusoro, ivo vaizove neyangu yakazara uye isina kukamurwa kutarisisa. Kunyangwe, hazvingamboitike ivo VaLawson vachiri ipapo.
Jun 6, 2007 pa 3: 42 PM
Semunhu aimbova mudzidzi weGHS, ndinofanira kudzivirira Mr. Lawson. Kutanga, ndakakatyamadzwa iye achiripo. Aive achembera pandakanga ndiri mukirasi yake! 🙂 Chechipiri, ndinonzwa kuti hapana chinotsiva bhuku rakanaka uye kunyatso kunyora bepa rekutsvagisa. Kutendeseka, ndakamuvenga - ndaive naye vese Jr. & Sr. Chirungu. Nekudaro, ini ndaive kumberi kune vezera rangu kukoreji nekuti ndaigona kunyora pepa rekutsvagisa nenzira kwayo, nezvimwe. Anogona kunge akura uye akaomarara uye haazomboshandisa internet chero chinhu - asi iwe uchamuonga mukoreji!
Dzimwe kosi dzinogona kushandisa tekinoroji kudzidzisa - ini handifunge kuti unogona neChirungu.